यो कस्तो चमत्कार ! दुबै हात नभएका सुदर्शनले फेरी कोरे विश्व रेकर्ड-Nagarikaawaj.com
यो कस्तो चमत्कार ! दुबै हात नभएका सुदर्शनले फेरी कोरे विश्व रेकर्ड
मङ्लबार, असार २४, २०७१
बुटवल २४ असार । मान्छे एउटा चिजमा निकै पोक्त हुन्छ चाहे त्यो कलाकारितामा होस वा अरु कुनै पेशामा तर संसारमा यस्ता मानिस पनि छन् जो एक चिजमा मात्र होइन धेरै चिजमा हात हालेर धेरै चिजमा सफल्ता पाएका पनि छन् । त्यस्तै भिडका एक व्यक्ति हुन् सुदर्शन गौतम । उनी एउटा कुराको मात्र बयान गर्यो भने सायद अपुरो हुन सक्छ किनकी उनी धेरै चिजमा धेरै काम गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । सानै हुदाँ एक दुर्घटनामा दुवै हात गुमाए पछि उनी खुटाका साहाराले साधारण मान्छेले गर्ने काम भन्दा पनि बढि गर्न सक्छन् । केहि बर्ष अगि मात्र उनले संसारको अग्लो शिखर सगरमाथाको सफल्ता पुर्वक आरोहण गरेका थिए । उनी खुटाले गाडी समेत चलाउछन् ।
साधारण मान्छेले चलाउने गाडी भन्दा पनि राम्रो सगँ चलाउने खुवी छ सुदर्शन सगँ । उनी खुटाले नै दैनिक क्रियाकलाप गर्ने गर्छन । उनी त्यतिमा मात्र सिमित छैनन् किनकी उनी नेपाली चलचित्रका नायक समेत बनिसकेका छन् ।
असोज महिनाको फुलपातिका दिन प्रदर्शन हुन लागेको रेखा थापाले निर्माण गरेको चलचित्र हिम्मतवालीमा सुदर्शन नायकका रुपमा देखिएका छन् । सुर्दशनको स्थार्ई बसोबास भने क्यानडामा हो । उनी नेपाल प्राय आउने र जाने गरिरहन्छन् । त्यहि क्रममा नायिका रेखा थापा सगँ भेटेपछि सुदर्शनलाई लिएर रेखाले चलचित्र निर्माण गरिन हिम्मतवाली । जसमा सुदर्शन रेखाको प्रेमी बनेर मुख्य पात्रमा देखिदै छन् । हाल सुदर्शन न्युयोर्कमा छन् । उनी केहि दिन अगाडी मात्र न्युयोर्क पुगेका थिए ।
उनी त्यहाँ हुदाँ विभिन्न ठाँउको भ्रमणगरिरहेका छन् । उनले हात विना नै प्यारासुटमा उडेका दृश्यहरु सुदर्शनले फेसबुकमा सार्वजानिक गरेका छन् । यो उनको विश्व रेकर्ड हो । च्चारिटिका लागी गरेको खेलमा सुदर्शनले २५००० हजार भन्दा रकम संकलन गरिदिएका छन् । न्यु जर्सी युनिभरसिटीले आयोजना गरेका खेलमा सुदर्शनले सो रकम संकलग गरिदिएका थिए । हिजो मात्र उनलाई एनआरएन अमेरिकाले सुर्दशनलाई सम्मान गरिसकेको छ । दुवै हात नभएकोमा ६००० मिटरबाट सुदर्शनले हामफालेका थिए ।
उनलाई अर्को जिनीस विश्व रेकर्डका लागी पनि स्काईड्राइभिगं कम्पनिले प्रोसेश अगाडी बढाइसकेका छ । एक पछि अर्को सफल्ता हात पार्ने क्रममा सुदर्शनलाई २०१४ नोभेम्बर ३ मा क्यानडा सरकारले हल अफ फ्रेम अवार्ड दिने भएको छ,उनले सो अवार्ड पाएपछि उनको फोटो क्यानडाको संसदहलमा ससम्मानका साथ राखिने छ । सो अवार्ड क्यानडाको नं १ अवार्ड हो । उनले क्यानडामा विजनेस कमपिलिङ्ग कलगरेन्स अर्वाडेड २०११बाट सम्मान भएका थिए । यसरी एकपछि अर्को सफल्ता हात पार्दै गएका सुदर्शन निकै प्रतिभावान व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । साच्चै उनको साहास र विस्वासलाई सारा संसारले सम्मान गर्नुपर्दछ ।
उनी न्युयोर्कमा केहि दिनको अरु काम सकाएर नेपाल र्फकने सुदर्शनले बताएका छन् ।उनी च्चारिटि शोका लागी मात्र होइन चलचित्र हिम्मतवालीको प्रमोशनमा पनि सुदर्शन उतिक्कै जुटेका छन् । अब चलचित्र हिम्मतवाली विदेशका ३५ वटा देशमा प्रदर्शन हुने पक्का भएको सुदर्शनले बताएका छन् । अगष्ट ३०मा युयसएबाट,क्यानडा,जापान,कोरिया हंगकङ्ग जस्ता विभिन्न विदेशी ठाँउमा चलचित्र हिम्मतवाली प्रदर्शन हुने भएको छ भने उता सुदर्शन विश्व रेकर्ड बनाउने सुर कसेका छन् । चलचित्र हिम्मतवाली प्रदर्शन भए पछि उनी विश्व रेकर्डमा नाम लेखाउने सुदर्शनले बताएका छन् । उता सुदर्शनको यस्तो सफल्ता हात पारेपछि यता रेखा भने निकै मख्ख छिन् ।